Articles tagged 'hospitals'
Medical Aid Societies Bill debate intensifies 30 September 2017 HARARE - Medical insurers have claimed there is nothing wrong with them operating medical facilities, as debate on conflict of interest looms. In a presentation made to the Health ministry on the Medical Aid Societies Bill the Association of Healthcare Funders Association said there was no jus...
RBZ allocates forex to stem drug crisis 15 September 2017 HARARE - The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has allocated an unspecified amount of foreign currency to the pharmaceutical industry in a frantic move to avert a potentially devastating drug shortage in the country. RBZ governor John Mangudya told the Daily News yesterday that the central bank...
Drug prices soar 14 September 2017 HARARE - A critical shortage of drugs is looming in Zimbabwe as pharmacies struggle to stock due to biting foreign currency challenges, which have forced them to hike prices of essential medicines. Zimbabwe is relying on foreign imports for its drugs, equipment and hospital consumables and imp...
Hospitals fail to conduct forensics 21 August 2017 HARARE - Zimbabwe's hospitals are failing to conduct forensic pathology examinations as there are no gas chromatograph machines to conduct the processes which are used to ascertain the cause of death of individuals and assist in solving crime. Health deputy minister Aldrin Musiiwa said governm...
Govt seeks partner for drugs-maker CAPS 16 August 2017 HARARE - Government is looking for an investor to inject $6 million in once Zimbabwe's and southern Africa's biggest drug manufacturer — CAPS Holdings — which has been teetering on the brink of total collapse ever since it started experiencing financial problems more than five years ago. CAPS...
Zim hospitals in need of revival 16 August 2017 HARARE - Vice President Emmerson Mnangagwa had to be airlifted to South Africa last week to receive urgent medical assistance following suspected food poisoning. Mnangagwa fell ill in Gwanda, where he was attending President Robert Mugabe's sixth youth interface meeting. He initially received ...
I'm praying for Mugabe's health: Chamisa 4 April 2017 HARARE - MDC's Nelson Chamisa, pictured, has said he is praying for good health for President Robert Mugabe so he lives beyond 2018 “to see a new MDC-run Zimbabwe in which he will need not travel overseas for healthcare.” This comes as the 93-year-old leader continues to splurge millions on fr...
Make renal treatment accessible, affordable 11 March 2017 HARARE - Health minister David Parirenyatwa's recent revelation that over 1 000 cases of chronic kidney failure are being reported in Zimbabwe, with only 700 of these on dialysis, should make our government take this health challenge more seriously. In line with the Zimbabwe government's polic...